တရုတ်နိုင်ငံက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ပိုမိုရရှိရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ပေကျင်းရှိ Sinovac Biotech လီမိတက်တွင် COVID-19 inactivated ကာကွယ်ဆေး နမူနာများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဩဂုတ် ၁၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ပိုမိုရရှိရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာသို့ ကာကွယ်ဆေး သန်း ၇၇၀ ကျော်နှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအား ကာကွယ်ဆေး ပေးအပ်မှုအရ ပထမအဆင့်တွင် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
“တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေရတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကို အကောင်းဆုံး ကူညီဖို့ လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နိုင်ငံတကာဖိုရမ် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးသို့ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ၌ ပြောကြားထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ယခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံး ကမ္ဘာသို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၂ ဘီလီယံ ပံ့ပိုးရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ COVAX အစီအစဉ်သို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကာကွယ်ဆေးများအား “ကမ္ဘာ့ပြည်သူ့ကုန်စည်” အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည့် ၎င်း၏ ကတိကဝတ်အား ဖော်ဆောင်ရာတွင် နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ရပ် ဖော်ဆောင်ခြင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း ရှီက ပြောခဲ့သည်။ ဩဂုတ် ၄ ရက်အထိ ဝင်ငွေမြင့်မားသော နိုင်ငံများရှိ လူဦးရေ ၅၁.၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးသောနိုင်ငံများတွင် ၁.၃၆ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) မှ ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်အရ သိရသည်။
ကာကွယ်ဆေးဖော်ထုတ်မှုမှ ကာကွယ်ဆေးလျှောက်ထားမှုအထိ တရုတ်နိုင်ငံသည် ပြည်သူများ၏ အသက်ကို အမြဲတစေ ပထမနေရာတွင် ထားရှိကြောင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအချို့၌ ကာကွယ်ဆေးများအား သိုလှောင်ထားချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံက ပွင်းလင်း၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသော သဘောထားထားရှိကာ လိုအပ်လျက်ရှိသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား ကာကွယ်ဆေးများ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်း အာရှအတွက် ဘိုအောက်ဖိုရမ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Li Baodong က ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေးများအား အရေးပေါ် အသုံးပြုရန်နှင့် COVAX အစီအစဉ်အတွက် WHO ၏ အရေးပေါ်အသုံးပြုအတွက် ကာကွယ်ဆေးစာရင်း၌ ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ကာ ဘေးကင်းမှုနှင့် ထိရောက်မှုကိုလည်း ပြသလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အဖွဲ့အစည်းများကလည်း လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအဆင့်သုံးခု ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ကျော်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးဆိုင်ရာ အသိဉာဏ်မူပိုင်ခွင့်များအား ဖြေလျှော့ရေး ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Aug. 10 (Xinhua) — China has been striving to make COVID-19 vaccines more available in developing countries, and has already provided more than 770 million doses of vaccines and concentrates to the world.
“China will do its best to help developing countries cope with the COVID-19 pandemic,” President Xi Jinping said recently inawritten message to the first meeting of the International Forum on COVID-19 Vaccine Cooperation.
China will strive to provide2billion COVID-19 vaccine doses to the world throughout this year, and offer 100 million U.S. dollars to COVAX, Xi said, markingafurther step by China in honoring its commitment to making vaccinesa“global public good.”
From vaccine development to vaccine application, China has always put people’s lives first, and when some developed economies were stockpiling vaccines, China adopted an open and cooperative attitude, providing vaccines to developing countries in need, said Li Baodong, secretary-general of the Boao Forum for Asia.
Chinese vaccines have been added to the WHO’s list of vaccines approved for emergency use and the COVAX program, and have so far been approved for use in more than 100 countries, demonstrating their safety and efficacy.
Photo : A staff member displays samples of the COVID-19 inactivated vaccine at Sinovac Biotech Ltd., in Beijing, capital of China, March 16, 2020. (Xinhua/Zhang Yuwei)